I-Apple isungula i-beta yesibini kawonkewonke ye-macOS 10.12.5 | Ndisuka mac
Kwakhona abafana abavela eCupertino, baqhubekile nesiko lokumilisela usuku kamva i-beta yoluntu yenguqulo esele inabaphuhlisi. I-Apple isungule izolo emva kwemini (ixesha leSpanish) i-beta yesibini kawonkewonke ye-macOS 10.12.5, ibeta yesibini ethi, njenge-beta yabaphuhlisi, engasiniki zindaba zibalulekileyo, ngaphaya kwezo zinxulumene nokusebenza kunye nokusebenza kwenkqubo yokusebenza Ii-Apple Macs. Ukuba awukazikhuthazi kwaye ufuna ukuzama kuqala zonke iindaba ezithi iApple isazise kwiinguqulelo ezintsha zeMacOS, Kufuneka ubhalisele inkqubo ye-beta yokukhuphela i-beta yamva nje kwi-Mac yakho.
Okwangoku kubonakala ngathi kuzakufuneka silinde ukuba sifuna ukuba nophuhliso olutsha kwi-macOS, kuba emva kweebhetas ezimbini, yonke into ibonakala ibonisa ukuba uhlaziyo lwe-macOS olulandelayo alusayi kusizisela utshintsho kubuhle kodwa luza kugxila ekuphuculeni izinto zangaphakathi ukusebenza kwenkqubo yokusebenza. Ukuba ukukhutshwa kwenguqu yokugqibela ye-macOS 10.12.5 kulibazisekile kakhulu, kunokwenzeka ukuba kuzo zonke iinyanga eziseleyo kude kube yingcaciso ephambili yeWWDC masingaboni ezinye iindaba. Emva kwengcaciso ephambili siya kuba nakho ukukhuphela kwakhona i-beta yokuqala yento eza kuba yinguqulelo elandelayo ye-macOS, inombolo 10.13.
Kuba iApple iyakwazisa ngokusesikweni inkqubo kawonkewonke ye-beta, zombini ze-iOS kunye neMacOS, uzinzo lwe-beta luphuculwe kakhulu xa kuthelekiswa neminyaka edlulileyo, iminyaka yokufaka i-beta ye-macOS, bekufuneka ube nesibindi okanye usebenzise iMac ebesiyisebenzisa kuphela kuvavanyo. Ngethamsanqa, kangangexesha elithile, uzinzo luphucule umbulelo kwingxelo enikwa ngabo bonke abasebenzisi abayinxalenye yenkqubo ye-beta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha iBeta yesiBini yoLuntu yeBeta ye-macOS 10.12.5
I-T-shirts kunye nezikhonkwane zabasebenzi be-Apple abakhuphisana kwi #CloseTheRings